Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Bangkok dia miomana amin'ny traboina amin'ny tondra-drano lehibe
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Olona fito no maty, ary izy roa lahy tsy hita nanomboka tamin'ny Alahady amin'ny tondra-drano niteraka ny Tropical Storm Dianmu.
Thai renivohitr'i Bangkok sy ny faritra hafa vaovao namoaka fampitandremana ny mety ho henjana tondra-drano.
Hatreto, olona 7 no maty ary 2 no tsy hita ao amin'ny tondra-drano lehibe izay namely Tailandy hatramin'ny Alahady.
Nanaiky ny governoran'i Bangkok fa mora tratran'ny tondra-drano avy any Chao Phraya ny renivohitra.
Thailand Departemantan'ny fisorohana ny loza voajanahary sy ny fanalefahana nilaza androany fa olona fito no maty, ary izy roa lahy tsy hita nanomboka tamin'ny Alahady amin'ny tondra-drano niteraka ny Tropical Storm Dianmu.
Alaska Airlines dia nanolotra sarimihetsika liana vaovao any San Francisco miaraka amin'ny fankalazana ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena San Francisco misy mascot Giants "Lou Seal"
Thai tompon'andraikitra amin'ny loza voajanahary nanambara fa tokantrano 197,795 amin'ny faritany 30, ny ankamaroany dia ny faritra avaratra, avaratra atsinanana sy afovoany no voakasik'izany - fiakarana 56-isan-jato tamin'ny 126,781 notaterina iray andro talohan'io. Ny oram-be dia mbola tombanana ho an'ny faritra maro.
Ankehitriny, ny renivohitra Bangkok ary ny faritra hafa ao afovoan'i Thailand dia nahazo fampitandremana vaovao momba ny tondra-drano mahery vaika, tahaka ny tra-boina ny manam-pahefana nilaza fa nihena ny fandrahonana tany amin'ny faritany 13 amin'ny 30 any an-toeran-kafa izay tratry ny oram-be mikija.
Ny goavam-be dia be ny rano nikoriana teo Chao Phraya avy any avaratra no be tohodrano sy ny tahirin, niteraka avy hatrany rehefa navoaka ny fampitandremana Bangkok ary ny faritanin'i Lopburi, Saraburi, Ayutthaya, Pathum Thani ary Nonthaburi.
Bangkok Governora Aswin Kwanmuang niaiky androany fa noho ny renivohitra ao ambany tany mandainga, dia mora nitobaka avy amin'ny Chao Phraya, ka notrohinao mbamin'ny faikany tsy azo haingana. Parts tao an-tanàna dia safotry tao amin'ny safo-drano lehibe 2011, nanome voalohany indrindra amin 'ny rano nivoaka ny tahirin tany avaratra.
Nitanisa ny fepetra raisin'ny tanàna hiatrehana ny tondra-drano ny governora, ao anatin'izany ny fanomanana paompin-drano mifandraika amin'ny tionelin'ny rano mikoriana.
Raha toa ka mbola nahavita niatrika ny rotsakorana tamin'ity taona ity ny tohodrano sy ny toho-drano lehibe any avaratra, ny hafa akaiky kokoa an'i Bangkok dia nanatona na nihoatra ny fahaizany tamin'ity volana ity ary voatery nandefa rano.